Ukutshintshwa kwescreen se-oled hard se-iPhone XS MAX
Incell indawo ye-LCD ye-iPhone 11
Incell indawo ye-LCD ye-iPhone 11 pro
Incell indawo ye-LCD ye-iPhone 11 Pro Max
Incell indawo ye-LCD ye-iPhone XR
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 6G
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 6P
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 6S
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 6SP
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 7G
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 7P
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 8G
Ukutshintshwa kwesikrini seLCD kwi-iPhone 8P
Ngaba uyazi ukuba isikrini sokuqala sithathelwe indawo xa kulungiswa iselfowuni? Ngena ndikufundise indlela yokuchonga esona sikrini kunye nescreen sokukhohlisa
Ngokwesiqhelo, sihlala sihlangana nemeko yokuba iscreen sefowuni ephukileyo senziwe ngengozi, ezinye iimeko zigqutyuthelwe ngeglasi, ezinye siscreen sangaphakathi asibonisi saphukile. Umlungisi weqela lesithathu uya kukubuza ukuba uyafuna na eyokuqala okanye eqhelekileyo. Inzala ...
Ngaba uyazi malunga nophuhliso lwefowuni ephathekayo? Ibutshintshe nyhani ubomi bethu
Ixesha le-BPM Ukuthetha ngale mveliso, abanye abantu kufuneka ukuba bayibonile. Ngapha koko, ngokungqongqo, le mveliso ayinakubizwa ngokuba siselfowuni. Esi sixhobo savela okokuqala ngenkulungwane yama-20, xa iShanghai yayisixeko sokuqala ukuvula izikhululo zokupakisha. Emva koko, izixhobo zeBP zingene ngokusemthethweni kwi ...
Emva kwenani lescreen sokubonisa ifowuni, kuya kuphumelela phi ukubonisa iscreen esiphathwayo
Ubungakanani buhlala bungumgaqo obalulekileyo kuphuhliso lwefowuni yeselfowuni, kodwa ifowuni ephathekayo engaphezulu kwe-intshi ye-6.5 ayilungelanga ukubamba isandla esinye. Ke ngoko, akukho nzima ukuqhubeka nokwandisa ubungakanani bescreen, kodwa uninzi lweefowuni eziphathwayo zinike ...
Kutheni le nto isikrini sijonge ezantsi xa ifowuni ephathekayo isedesikeni? Ayisiyomfihlo nje kuphela
Makhe ndikubuze umbuzo kuqala Iselfowuni ihlala ibekwa etafileni xa ingasetyenziswa, Ngaba uyayibeka phezulu okanye uyibeke phantsi? Kodwa uyazi ntoni? Beka iselfowuni kwidesktop kunye nescreen ezantsi. Uyazi ukuba kutheni emva kokufunda oku kulandelayo? Izinto ezintathu ezilungileyo ...
Imveliso eshushu, Imephu yendawo, I-AMP Iselula